तैनाती दर को मतलब छ? वित्तीय लिङ्कमा परिभाषा
सुरु ऋण wiki तम्तयार चासो
तैनाती दर के हो?
प्रावधान शुल्कहरू प्रावधान आयोगहरू लाई पनि भनिन्छ वा चासो राख्नु पर्दछ। उधार को मामला मा, प्रावधान ब्याज को घटना मा चार्ज गरिन्छ कि ऋण सम्झौता मा प्रदान को लागि भुगतान तिथि को बीच र वास्तविक सहमति मा सहमत ऋण रकम समयको लामो अवधि। गणनाको दुई तरिका बैंकहरूद्वारा प्रयोग गरिन्छ, जुन क्रेडिट योग्य र गैर-योग्य छन्। केवल उल्टाइएको क्रेडिट योग्य प्रावधान विधिमा समावेश गरिनेछ, केवल ऋणको यस भागको लागि यो गिरावट हुनेछ तम्तयार चासो मा। गैर-चार्जयोग्य तरीका, प्रतिबद्धता दर, ऋण को खाता भाग मा राख्छ र कुल राशि को लागी प्रतिबद्धता राशि को बिल नहीं गर्दछ। नयाँ निर्माण परियोजनाहरूको लागि, क्रेडिट डिलिवरी विधि प्रायः रुचाइएको छ किनकी पूरा अवधि को समयमा फिर्ता लिइएको आंशिक मात्रा प्रतिबद्धता दर को गणना मा प्रयोग गरिन्छ। यदि केवल किनकी पेआउट को दिन र आंशिक रकम को वास्तविक भुगतान को बीच सामान्यतया एक लंबी अवधि हो, जुन बैंक अनावश्यक तरिका मा चार्ज गरिएको छ।
ऋण भुक्तानीमा ढिलाइ खरिद गर्दछ
मध्यम र दीर्घकालीन क्रेडिट, घरहरू निर्माण गर्न प्रयोग उदाहरणका लागि हो जसको लागि, एक incongruities उत्पन्न हुन सक्छ, ऋण अलग अक्सर भुक्तानीको समय कारण अनियमितताहरु गर्न निर्माण समयमा पारी किनभने लागू हुनुपर्छ। बैंक, मुद्रा लगानी गर्दा क्रेडिट को निर्धारण मा अक्सर कम चासो भुक्तानी किनभने यसरी धेरै अवस्थामा एक ब्याज दर बेफाइदा छ। यो फरक लागि क्षतिपूर्ति गर्न प्रावधान दर, त्यसैले बैंक देंगे द्वारा कुनै वित्तीय बेफाइदा छ। निर्माण परियोजना योजना र बाँकी क्रेडिट अब आवश्यक छ भन्दा बढी अनुकूल पूरा गर्न सकिँदैन किनभने लामो ऋण को एक भाग अब आवश्यक भएपछि, ऋण रकम बैंक सहमत यदि कम छ। को सहमत समय देखि, अचानक बैंक भुक्तानी गर्न छैन कुनै आवश्यकता छ कि ऋण भाग लागि प्रावधान दर। उधारकर्ता त्यसपछि यस्तो अवस्थामा बाँकी ऋण रकम को प्रतिबद्धता रुचि र उधारो दर लागि पैसा बचत गर्न सक्नुहुन्छ।
प्रतिबद्धता चासो कहिले कब हुन्छ?
चयन गरिएको बैंकले निर्णय गरेको निर्णय चार्ज गरिएको छ वा छैन कि निर्णय गर्दछ, यो कानून द्वारा आवश्यक छैन। सम्बन्धित निर्माण ऋण को शर्तहरुमा ठेकेदार को स्थापित गरिएको छ कि एक प्रतिबद्धता ब्याज को भुगतान गरेको छ। ऋण मिति को अनुसार, प्रावधान ब्याज यो ऋण सम्झौता मा नोटिस गर्दा अर्जित गर्दछ। ऋण को प्रावधान मा रुचि गणना को अवधि को लागी गणना को लागी ऋण पूर्ण रूप देखि बुक गरिएको छ। ऋणदाता सामान्यतया एक निश्चित अवधि को समयमा अनुदान दि्छ जसको समयमा कुनै प्रतिबद्धता रुचि छैन। चासो बिना ब्याज अवधि क्रेडिट संस्था र ऋण को राशि मा निर्भर गर्दछ। केही बैंकले गैर-प्रावधान गर्ने अवधि निश्चित शुल्कको लागि ब्याजको साथ विस्तार गर्दैन, तर अरूलाई दिइएको समयबाट विघटन गर्दैन। यदि ऋण सहमत गरिएको समयमा प्रयोग गरिएको छैन भने, बैंकले प्रावधान दरको लागि कम्तिमा 0,25 प्रति महिना चार्ज गर्दछ; वास्तविक प्रतिशत बैंकबाट बैंकमा भिन्न हुन्छ। यदि ऋण उपलब्ध गराउन ब्याज दरलाई रोक्न सकिन्छ, उदाहरणका लागि, बैंकसँग सहमति भएको छ कि ऋणको कुल रकम पूर्णतया परिपक्वतामा वितरण गरिनेछ र उधारकर्ताको जम्मा खातामा पठाइएको छ।
अघिल्लो लेखउधारो सीमा